Osisi kacha mma maka ebe ị na-ere ọkụ
Osisi bụ ụzọ dị mma gburugburu ebe obibi nke imepụta ọkụ n'ụlọ ma ọ bụrụ na ejiri osisi ziri ezi na nkụ ọkụ. Osisi anyị na-ewepụta oxygen n'ehihie site na photosynthesis na carbon dioxide n'abalị ka anyị si na-ere ọkụ anyị anaghị emetụta nguzo nke okike ma ọ bụrụhaala na tre ...GỤKWUO »
Tụle Okpokoro Osisi na Ebe E Si Enweta Multi-Fuel
Post oge: Mee-14-2019
mp na-eburu Osisi Osisi na Multi-Fuel Stoves Wood stovu nwere ọtụtụ uru ma e jiri ya tụnyere multi-mmanụ ọkụ stovu. Maka ndị na-ebido ebido, stovu nkụ dị ọnụ ala karịa ọkụ ọkụ nwere ọtụtụ mmanụ, ma n'okwu nke ịzụta ezigbo stovu n'onwe ya yana ụgwọ ọkụ. N'ezie, stovu osisi na mmanụ ọkụ bụ che ...GỤKWUO »
China International Bubata Ngosi
Post oge: Nov-29-2018
A ga-akpọ mba na mpaghara ndị dị mkpa ka ha sonye na CIIE iji gosipụta ihe ha rụzuru nke azụmahịa na itinye ego, gụnyere azụmaahịa na ọrụ, ụlọ ọrụ, itinye ego na njem, yana ngwaahịa ndị na-anọchite anya mba ahụ .. .GỤKWUO »
Post oge: Nov-08-2018
Ọdịnaya ỌZỌ KWES FORR FOR FORLỌ NA AKA NA-AHV AKA A ga-akpọ mba na mpaghara dị iche iche ka ha sonye na CIIE iji gosipụta ihe ha rụzuru nke azụmahịa na itinye ego, gụnyere azụmaahịa na ọrụ, ụlọ ọrụ, itinye ego na njem, yana ngwaahịa ndị nnọchiteanya nke .. .GỤKWUO »
Iwu anọ ga-eso ma ọ bụrụ na ị jiri nkụ nkụ
Iji osisi ọkụ ọkụ na-achọ usoro dị iche iche, ma ọ bụrụhaala na ị na-agbaso iwu ndị a, ịnwere ike iji osisi dị ka ọkụ eletrik, gas ma ọ bụ mmanụ ụgbọala. 1. Ndị ọkachamara ga-arụnyere ya. 2. Ndị ọkachamara ga-ehichapụ ọkụ ọkụ mgbe niile.GỤKWUO »
Nchebe nke nkụ na-ere ọkụ
Post oge: Ọgọstụ-01-2018
Nchebe nke nkụ na-ere ọkụ Ọkụ na-enwu ọkụ na-ekpo ọkụ site na osisi okike, yana ime ụlọ ọkụ na-ere ọkụ, yabụ enweghị ihe egwu nke ịmịpụ gas ma ọ bụ radieshon eletrik. Ọ dị ezigbo mma. 1, oku oku juputara kpamkpam, ihe nke ulo oku bu iguzogide ikpo oku ...GỤKWUO »